Okpukpe nke Ndị Nwụrụ Anwụ (Naples) - WRSP
Okpukpe nke Ndị Nwụrụ Anwụ (Naples)
1274: A nakweere Purgatory dị ka ozizi Katọlik ma kọwaa ya na Churchka dị ka “ebe ịdị ọcha nke mkpụrụ obi na-esị ga n'ụzọ paradaịs” na Kansụl nke abụọ nke Lyons.
1438-1443: Kansụl nke Florence gbakwụnyere na "oke oke nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi ka dị ndụ bara nnukwu uru n'iweta [mkpụrụ obi na pọgatrị] nnwere onwe pụọ na ụdị ntaramahụhụ a."
1563: Iwu ọzọ gbasara pọgatrị ka emere na Kansụl nke Trent, na-akọwapụta echiche ndị Churchka kwadoro banyere pọgatrị site na “ihe ndị ahụ nwere ụdị ịchọ ịmata ihe ma ọ bụ nkwenkwe ụgha, ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ nke ezigbo ego”.
1476: Pope Sixtus nke anọ gosipụtara na ndị dị ndụ nwere ike ị nweta ụgwọ indulgences maka mkpụrụ obi na pọgatrị, si otú a na-ebelata oge mkpụrụ obi ọ bụla nọ ebe ahụ.
1616: Otu ndị ama ama nke Neapolitan guzobere Congrega di Purgatorio ad Arco, otu ndị ewepụtara maka ili ndị ogbenye na ikpe ekpere maka mkpụrụ obi ha na pọgatrị.
1620s: St Robert Bellarmine kụziri na mkpụrụ obi na pọgatrị nwere ike inyere ndị dị ndụ aka n'ihi na ha nọ Chineke nso karịa ndị bi n'ụwa; ma nkpuru obi na pọgatrị enweghị ike ịnụ arịrịọ ekpere a kapịrị ọnụ.
1638: Chọọchị Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco mechara ma doo ya nsọ. N’okpuru ụka a bụ hypogeum nke ndị Congrega di Purgatorio ad Arco ji maka ili ndị obodo ahụ.
1656-1658: Ọnwụ Ojii, ma ọ bụ ihe otiti Bubonic (Yersinia pestis), bibiri Naples, na-egbu ihe dịka ọkara nke ndị bi n'obodo ahụ. N'ime ndị e mere atụmatụ na ha nwụrụ 150,000, e liri ọtụtụ n'ime ha n'olulu ma ọ bụ n'ọgba tufa ndị dị ugbu a na-enweghị akara.
1780s: Onye ụkọchukwu Neapolitan, St Alphonsus Maria de 'Liguori nke Naples, wuru na nkuzi nke St. Robert Bellarmine na pọgatrị. Liguori kụziri na Chineke na-eme ka ekpere nke ndị dị ndụ mara mkpụrụ obi na pọgatrị, nke mere ka ndị nwụrụ anwụ nwee ike inyere ndị dị ndụ aka na ihe dị mkpa na ụwa.
1837: Ndị na-arịa ọrịa ọgbụgbọ na ọnya ọgbụgba na Naples lie na nnukwu ili gbara gburugburu obodo ahụ, gụnyere ebe a na-eli ozu Fontanelle.
1872: Nna Gaetano Barbati depụtara ọkpụkpụ na ebe a na-eli ozu Fontanelle na ndị ọrụ afọ ofufo sitere n'obodo ahụ, bụ ndị kpere ekpere maka ndị nwụrụ anwụ mgbe ha rụchara ọrụ ahụ.
1940-1944: Otutu tufa abaitiat eji mee ihe dị ka ebe a na-eli ozu rụrụ dị ka ebe nchekwa bọmbụ n'oge Agha Worldwa nke Abụọ, na-enye ihe ọhụrụ maka ndị dị ndụ ikpe ekpere nye mkpụrụ obi na pọgatrị, bụ ndị ọkpụkpụ ndị e liri n'ebe ahụ nọchiri anya ha.
1969: Achịbishọp nke Naples, Corrado Ursi nyere iwu na "ngosipụta nke ofufe metụtara ozu mmadụ" bụ "aka ike, nkwenkwe ụgha, ya mere ekwenyeghị."
1969: E mechiri ebe ili ozu Fontanelle, ma mechie Okpukpe nke Ndị Nwụrụ Anwụ.
1980: Ala ọmajiji ahụ Irpinia gburu Naples, na-emechi ụka Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, na-egbochi mmemme ndị fọdụrụnụ nke Cult of the Dead.
1980s (Mbubreyo): Ejiri m Fontanelle ka m mee njem ma gbochie "mbibi" na ebe a na-eli ozu Fontanelle, ma usoro nke ọgba ahụ n'onwe ya na ọrụ na-adịgide adịgide nke Cult of the Dead.
1992: E meghere ụka Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco mgbe arụchara ọrụ mweghachi.
2000-2004: Ọrụ mweghachi ọzọ na Fontanelle na-eli ozu mere.
2006: E meghere ebe a na-eli ozu Fontenelle na njedebe.
2010: E meghere ebe a na-eli ozu Fontenelle oge zuru ezu.
Nye ndị òtù ya, aptù Nwụrụ Anwụ nke Neapolitan dị dị ka akụkụ nke okwukwe Katọlik. N’ezie, ndị na-eso ụzọ ya adịghị ewerekarị nkwenkwe okpukpe ha dị ka ihe ọ bụla ọzọ na-abụghị Katọlik ma ọ bụ jiri aha “Cult of the Dead” mee ihe. Kaosinadị ndị ụka Katọlik, òtù nzuzo a bụ onye jụrụ okwukwe ma dịrị na mpụga okwukwe. A pụrụ ịghọta nkwenkwe ndị bụ isi nke òtù nzuzo ahụ dị ka ngwakọta nke ozizi Katọlik banyere pọgatrị na okpukpe ndị mmadụ na-adịbu n'ime Alaeze mbụ nke Naples (nke dị na Southern Italy). Na okpukpere chi ndi obodo a, ndu di ndu iwulite mmekorita nke onwe ya na nkpuru obi ndi nwuru anwu. Ha na-ele mmekọrịta ndị a anya dị ka ụzọ dị mkpa iji nweta ọrụ ebube ma melite ndụ kwa ụbọchị.
Iji ghọta otú ulttù Ndị Nwụrụ Anwụ si ahapụ mmekọrịta ndị Katọlik na mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ, mmadụ ga-ebu ụzọ ghọta echiche na mmalite nke pọgatrị.
Dị ka Jaques Le Goff depụtara n'akwụkwọ ọmụmụ seminal ya, Ọmụmụ nke Purgatory, na narị afọ nke iri na abụọ na nke iri na atọ, echiche nke ndụ mgbe a nwụsịrị ghọrọ ihe doro anya n'ihi ọtụtụ mgbanwe ọdịbendị. Otu mgbanwe dị mkpa kachasị mkpa bụ mmalite nke echiche nke ikpe ziri ezi; A na-ahazi ahụhụ maka mpụ dabara n'ọnọdụ ọ bụla. Echiche a mechara ruo mgbe mmadụ nwụsịrị na akara aka mmadụ nwere mgbe ọ nwụsịrị gosipụtara ịdị ukwuu nke mmehie ya. Emezuru nke a site na echiche nke uzo nke ato, n'abughi eluigwe na ala mo. Ọ bụ ebe na-adịru nwa oge maka ntaramahụhụ na mkpuchi mmehie nke dị n'akụkụ hel. Ekwere na nkpuru obi nile nke nmehie mebiri gara ebe ahu oge nke kwekọrọ onu ogugu na oke nmehie nke mmadu tupu ekwenye ya n’eluigwe. A na-akpọ ebe ahụ "pọgatrị" [Foto dị n'aka nri bụ Fresco nke mkpụrụ obi na pọgatrị], a nabatakwara echiche a n'eziokwu dị ka nkuzi na 1274 na Council nke abụọ nke Lyons.
Ka ọ na-erule na narị afọ nke iri na ise, nkwenkwe Katọlik kwere ka ndị dị ndụ rite ụgwọ maka mkpụrụ obi na-ata ahụhụ na pọgatrị dịka ha rụbururị onwe ha. (Nnukwu afọ ojuju bụ mgbaghara ma ọ bụ mbenata nke ntaramahụhụ anụ ahụ maka mmehie, nke a rụpụtara site na omume ime mmụọ na ọrụ ebere.) Nke a mere ka ike nke pope (onye nyere ndị a ihe ịkwa iko) sitere na mpaghara ụwa ruo mgbe a nwụsịrị na nke mbụ. N'ihi nke a, ndị ụkọchukwu nọ n'ọkwá dị elu, bụ́ ndị ọ na-agụ agụụ ịmụba ikike ndị popu, nabatara echiche nke ịgbaghara ndị nwụrụ anwụ ngwa ngwa. Agbanyeghị ndị nkịtị nabatara ụdịrị ọrụ ebere a maka ndị nwụrụ anwụ maka ebumnuche dị iche iche.
N’ime alaeze nile nke Naples, Katọlik a ma ama na-arụ ọrụ ugbu a n’ụzọ na-ekwekọghị ekwekọ, site n’ekpere-tit-tat nke ekpere a na-ekpe maka ihu ọma Chukwu enyere. Okpukpe Katọlik nke ndị a gosipụtara ọdịnala nye ndị ụkọchukwu mana ọ bụ heterodox na omume. Ọ bụ ụdị ofufe mmadụ na-eme n'otu n'otu, nke sitere na nsonaazụ ya na nkwenye na anwansi anwansi na amoosu, ọkachasị n'etiti ndị otu obere. Specific icons nke Madonna, yana ihe ndi ozo nke ndi nso putara ka ndi laity na-asọpụrụ n'ụzọ ọdịnala (site n'ikpe ekpere na akara ngosi ma ọ bụ relic, ọ bụghị na Ekpere ndị a na-abụkarị na akara ngosi ma ọ bụ senti. N'aka nke ya, a na-atụ anya na ihe oyiyi na ihe ndị a iji ike ha karịrị nke ha nyere onye na-asọpụrụ ha ofufe aka. Mgbe a zara ekpere, onye rịọrọ rịọrọ ga-eweta akara ngosi ekele, a na-akpọ otu ex voto, gaa n'ụlọ arụsị ebe a rịọrọ arịrịọ [Foto dị n'aka nri]. Na Okpukpe Katọlik, ex votu a na-enye n'efu na ekele; agbanyeghị, na Katọlik ndị obodo Neapolitan, onyinye ndị a na-egosi mmekọrịta pụrụ iche, mmekọrịta n'etiti mmadụ na ihe dị nsọ dị egwu (akara ngosi ma ọ bụ ihe okike). Site na oge a nke nnata na mmekorita, enwere ike ichota mmekorita a na ibe ya ma enwere ike gbanwee ya oge obula ma oburu na ihe di nsọ ghara ime ma obu onye kpaliri igosi ekele.
Mgbe Chọọchị Katọlik mechara kwe ka a na-ekpe ekpere maka mkpụrụ obi na pọgatrị, mmekọrịta ndị a, nke a na-ejibu ndị nsọ na Virgin Mary, gbasaa gụnyere ndị nwụrụ anwụ n'agbanyeghị agbanyeghị Chọọchị kwenyesiri ike na mkpụrụ obi na pọgatrị enweghị ike karịrị nke mmadụ. Nkwenye a ekwenyeghi, na nkpuru obi ndi nwuru anwu nwere ikike inyere ndi di ndu aka, guzobere ntoala nke Cult of the Dead in the Kingdom of Naples. Ndị ọkà mmụta okpukpe Katọlik a ma ama na ndị ụkọchukwu dịka St. Robert Bellarmine na St. Alphonsus Maria de 'Liguori nwara ịgbasa mmekọrịta ọdịnala na mkpụrụ obi na pọgatrị gụnyere ịgụnye ha ekpere ozugbo. Olileanya bụ ịgụnye ndị Neapolitan jụrụ okwukwe kama ịhapụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi na mpaghara nke akụkọ ihe mere eme siri ike maka papiti. Otú ọ dị, usoro ndị a emeghị ka echiche nke purgatory nke Neapolitan banye n'ụzọ ọdịnala ebe ọ bụ na mgbaghara nke pọgatrị ya na usoro nke afọ ojuju nke ịba ụba nke ọma bụ nke ejiri echiche nke okpukpe Katọlik dị ugbu a.
Mmetụta nke Okpukpe Ndị Nwụrụ Anwụ na Katọlik dị na hastali etoola ma daa, ma ọnụnọ ya abụkarị nke a na-ahụkarị n'oge esemokwu: ọkachasị n'etiti ụmụ nwanyị ndị ọrịa, ọdachi ndị na-emere onwe ha, ma ọ bụ agha na-enweghị ike na ikike n'ime. Chọọchị Katọlik. Ọ bụ ezie na ulttù Ndị Nwụrụ Anwụ dị ugbu a n'oge gara aga Alaeze nke Naples nke gụnyere ọtụtụ nke Southern Italy taa, ọ jidere obodo Naples n'ihi akụkọ ihe mere eme pụrụ iche nke nnukwu ọdachi. Nke a bụ isi ebe ọnụnọ nke òtù nzuzo ahụ ka ga-enwe mmetụta taa.
Mgbe ị na-ekpe ekpere maka mkpụrụ obi na pọgatrị dị na Chọọchị Katọlik, e nwere nnukwu esemokwu abụọ na-ekewapụ nkwenkwe nke Cult of the Dead na nke ndị ụka. Nke mbụ bụ mmekọrịta dị n'etiti ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ. Katọlik Ozizi anaghi ekwe ka nkpuru obi na purgatory nwee ike inye ndi di ndu amara, o kwenyeghi na ha kwesiri ka a kwanyere ha ugwu dika mmadu gha asọpuru ndi nso ma obu Virgin Mary. Maka ndị Katọlik Ọtọdọks, mmekọrịta dị n'etiti ndị dị ndụ na mkpụrụ obi na pọgatrị bụ otu akụkụ na ọrụ ebere: ekpere ndị ndị dị ndụ kwuru bụ ka ha belata oge ndị nwụrụ anwụ na pọgatrị na-enweghị atụmanya ụgwọ ọrụ. N'ụzọ dị iche, ndị otu Cult of the Dead na-atụ anya na mkpụrụ obi na pọgatrị ga-anụ ekpere ha ma metụta mgbanwe ngwa ngwa na ndụ ha. Uru a gbakwunyere na-akọwa ọrụ pụrụ iche na pọgatrị na Naples, site na ọnụ ọgụgụ dị elu nke confraternities ewepụtara maka ilekọta na ikpe ekpere maka ndị nwụrụ anwụ, dị ka Arciconfraternita dei Bianchi na Congrega di Purgatorio ad Arco, na omume Neapolitan nke iwu ụlọ arụsị mkpụrụ obi na pọgatrị na niches n'okporo ámá, [Foto dị n'aka nri] na-ejikarị ihe osise nke ndị mmadụ na-eguzo ọkụ na foto nke ndị ezinụlọ nwụrụ anwụ.
Ọdịiche nke abụọ dị na ọdịiche nke oftù Ndị Nwụrụ Anwụ na-eme n'etiti ndị nwụrụ anwụ a ma ama. Na Chọọchị Katọlik, ekpere e kpere maka mkpụrụ obi na pọgatrị nwere ike bụrụ ihe pụrụ iche mmadụ ma ọ bụ mkpụrụ obi nọ na pọgatrị n’ozuzu. A na-ewere nke ọ bụla dị ka ụzọ ọrụ ebere iji belata oge na purgatory maka ebumnuche. Agbanyeghị, Cult of the Dead na-ekewa mkpụrụ obi ụzọ abụọ: ndị nwụrụ anwụ ama ama na ndị nwụrụ anwụ amaghị. A na-asọpụrụ otu abụọ a n'ụzọ dị iche iche ma kwenyere na ha nwere ọdịiche abụọ dị iche.
A na-agwa ndị mkpụrụ obi a maara aha ha n'ekpere n'aha. Ekpere ndị a gwara ha na-eche na ha ga-ebelata oge ha na pọgatrị, mana ọ bụrụ na mmekọrịta a na-emekọrịta ihe, a na-eche na mkpụrụ obi ndị a esighi ike ma nwekwaa ike inye ọrụ ebube nye onye nyere ha ndụ.
Mkpụrụ obi ndị a na-amaghị ama dị mkpa nye Okpukpe Ndị Nwụrụ Anwụ, ebe a ka òtù nzuzo ahụ na-apụ n'ụzọ dị egwu site na nkuzi Katọlik. Na òtù nzuzo kwenyere na mkpụrụ obi ndị a na-amabeghị aha ha, ndị na-anwụkarị n'ihe otiti, agha, ma ọ bụ ọdachi ndị na-emere onwe ha, ga-adaba ruo mgbe ebighị ebi na pọgatrị. Mkpụrụ obi ndị a na-anọchi anya ọkpụkpụ ndị a na-amaghị aha na nnukwu ili ozu Naples na olulu ili ozu nke etinyere na-enweghị akara. [Foto dị n'aka nri]. N'ime Okpukpe nke Ndi Nwụrụ Anwụ, a na-asọpụrụ mkpụrụ obi ndị a n'otu n'otu ma na-eche na ha dị oke ike mgbe a bịara n'inye ndị dị ndụ ọrụ ebube. N'ihi nke a, a na-echetara ndị nwụrụ anwụ oge niile, site na nchịkọta na nchịkọta nke ọkpụkpụ ha (dị ka ebe a na-eli ozu Fontanelle), na-ewu ụka n'elu ebe e liri ha (dịka ọ dị na Santa Maria del Pianto na Santa Croce e Purgatorio al Mercato nke dochiri ihe ncheta kọlụm mbụ), ma ọ bụ na ichebe ozu ndị na-amaghị aha n'ime ụka (dị ka egosiri na Chiesa del Santissimo Crocifisso detta la Sciabica).
N'ime òtù nzuzo ahụ, mmekọrịta dị n'etiti ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ na-amaghị aha ga-anọgide na-agbanwe agbanwe. Ma n’enweghi ohere ịhapụ mkpụrụ obi na pọgatrị, ndị dị ndụ na-ekpe ekpere maka ya refrisco maka mkpụrụ obi ndị a na-amaghị ama. Refrisco a na-eche na ọ bụ ihe enyemaka nwa oge site na ọkụ pọgatrị, dị ka ihe ọ drinkụ drinkụ dị jụụ n'ụbọchị anwụ na-achasi ike. E gosipụtara echiche a na onyinyo nke Madonna nke Graces, ihe oyiyi a ma ama nke Virgin Mary na-achụpụ mmiri ara ara n'ime pọgatrị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ihe atụ ka dị, Chọọchị wepụrụ ihe oyiyi a n'oge Nzuko-Ndozigharị n'ihi mmụọ ya na mkpakọrịta ya na echiche ndị ama ama mana nke pọgatrị.
Dị ka nkwenkwe ya, na omume ya, Cult of the Dead na-emetụta ụfọdụ Katọlik. Mmekorita ndi a gunyere inwe otutu ndi mmadu kwuru maka ndi nwuru anwu na inweta obi nke nkpuru obi na purgatory site na ekpere na nchegharị (obu ezie na echiche nke inweta refrisco n'ihi na mkpụrụ obi ndị a na-amaghị ama bụ akụkụ nke echiche ndị mmadụ banyere pọgatrị nke Ctù Ndị Nwụrụ Anwụ nakweere, kama ozizi ndị Katọlik).
Emume mbu nke ejikọtara na Cult of the Dead nke na-adịghị n'ime Chọọchị Katọlik bụ nnabata na asọpụrụ nke mmadụ na-amaghị aha ya. Nke a nwere ike iwere ọtụtụ ụdị. N'echiche kachasị, obodo niile nwere ike ịnabata ebe a na-eli ozu dịka ebe a na-eli onye mkpọrọ, olulu mmiri ma ọ bụ ala ọkpụite ma wuo ihe ncheta ebe ndị mmadụ nwere ike ịbịa kpee mkpụrụ obi ekpere ma hapụ ndị omebe iwu. N’ebe ndị ọzọ, otu obodo nabatara foduru ihe ndị a na-amaghị aha ha ma bulie ya elu ka ndị mmadụ, dị ka ọ dị n’ihe banyere mummy nke akpọrọ “Uncle Vincent” [Foto dị n’aka nri] n’obodo Bonito.
Otú ọ dị, omume a nke ịnakwere na nsọpụrụ nwere njikọ chiri anya na obodo Naples na olili olili ya na hypogea. Nke a bụ ebe ndị otu Cult of the Dead bịara iwere okpokoro isi a na-akpọ "pezzentelle," nke pụtara "ụmụntakịrị dara ogbenye" ​​na olu Neapolitan. Ọ bụ ezie na Chọọchị na-ele ya anya n'okpukpe, a pụrụ ịghọta omume a nke ịrịọ okpokoro isi dị ka ihe si na ezi omume pụta nke omume Katọlik nke ịsọpụrụ ihe nsọ ndị senti.
N'ezie, okpokoro isi ndị a ma ama na Naples dị ka "Lucia Virgin Bride" (onye na-ezu ike na hypogeum na Santa Maria del Purgatorio ad Arco), "Donna Concetta," [Foto dị n'aka nri] na "Onyeisi" (ma na Fontanelle na-eli ozu) ka a na-emeso dị ka ihe mgbe ochie nke ndị nsọ, n'ihi na a na-ewere ha dị ka ihe ndị obodo na enweghị ike ịnabata mmadụ . Ha na-anata ekpere na ekele sitere n’aka ọtụtụ mmadụ ma na-anakọta ex votu, ka e wee zaa ekpere, dị nnọọ ka ndị nsọ na-eme n’ebe arụsị ha na-adị.
Ọ bụ ezie na okpokoro isi ndị a ma ama na-adọta mmasị nke ndị na-efe ofufe na ndị njem nleta, ịkwanye isi okpokoro isi na-ahụkarị n'ime Cult of the Dead in Naples. Ọ bụ ezie na ọ bụghị anụbeghị na Katọlik Ọtọdọks, a na-akụda mmụọ nke onwe onye ugboro ugboro, na-atụ egwu na ọ ga-eduga n'ikpere arụsị ma ọ bụ ịmụ nwa, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụ mgbe niile ka onye bara ọgaranya na-edebe ihe ncheta nke onye nsọ n'ụlọ. N'aka nke ọzọ, ịsọpụrụ onwe onye nke dị n'ime Cult of the Dead ka na-eme n'ihu ọha, na-abụkarị n'osisi dị ka ebe a na-eli ozu Fontanelle ma ọ bụ otu obere hypogea nke gbasasịrị na Naples, dị ka nke dị na Santa Maria delle Anime al Purgatorio ad Arco.
Usoro a na-amalite site na nkuchi. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-ahọrọ okpokoro isi bụ ndị na-arara onwe ha nye ya, na-amụ kandụl, ma ọ bụ nwee ike idowe mkpụrụ ego na ya [Foto dị n'aka nri]. N'ọnọdụ ndị ọzọ, onye ahụ kuchiri okpokoro isi nke na-abịakwute ndị dị ndụ na nrọ iji rịọ nsọpụrụ. Nkwukọrịta n'etiti ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ na-apụtakarị site na nrọ na mkpụrụ obi a na-akpọghị aha ga-ekpughere ndị dị ndụ aha ya otu a.
Na nnabata nke ọma, okpokoro isi na mkpụrụ obi ya na pọgatrị na-abanye na mmekọrịta mmekọrịta na onye dị ndụ. Ndị dị ndụ na-enye ekpere na refrisco n'ihi na mkpụrụ obi nọ na pọgatrị, na mkpụrụ obi na-aza site n'ịhụ na a zara ekpere onye ahụ. A na-ekwukarị na okpokoro isi a kwadoro na-agwọ enweghị ike ma ọ bụ nsogbu ahụ ike ndị ọzọ, na-enye nọmba lọtrị na-emeri, ma ọ bụ dozie nsogbu ụlọ. Mgbe ndị dị ndụ natara ọsịsa nke ekpere ha, ha na-akwụ ụgwọ okpokoro isi ex votu dị ka rosaries, okooko osisi, ma ọ bụ obere ụlọ ndị a na-ejikarị marble, iko, Plexiglas, ma ọ bụ osisi. [Foto dị n'aka nri] Ihe ndị a abụghị naanị ichedo okpokoro isi, kamakwa izipu ndị ọzọ na-achọ ihu ọma na okpokoro isi a bụ adịghị maka nkuchi. Okpokoro isi nke na-anaghị aza ekpere nwere ike ịnapụ ya onyinye ya ma hapụkwa ya mgbe ụfọdụ ka ọ nwee ike iji okpokoro isi mee ka mkpụrụ obi na-emesapụ aka. (Ọ bụ ezie na omume ịbọ ọbọ a abụghị nanị na Cult of the Dead na Naples, a tụbara bust nke onye nsọ obodo a ma ama, San Gennaro) n'ime oké osimiri na 1799 maka iji aghụghọ nyefee ọchịchọ nke ọchịagha French.)
Ndị na-eso ụzọ Neapolitan nke Cult of the Dead na-echekarị na ha ga-eji onyinye maka okpokoro isi ha na Mọnde, ọkachasị n'ebe a na-eli ozu Fontanelle. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu n'oge gara aga mgbe òtù nzuzo ahụ na-arụsi ọrụ ike, ihe akaebe nke oge a nke Cult of the Dead na-egosi n'oge na-adịghị anya.
Ọ bụ ezie na e nwere ndị isi ụka nke megoro echiche ọdịnala nke pọgatrị kachasị na Naples, dị ka St Alphonsus Maria de 'Liguori (onye buru ụzọ chee na Chineke nwere ike ịme arịrịọ maka ndị dị ndụ mara ndị nwụrụ anwụ) na Fr. Gaetano Barbati, enweghị onye ndu ma ọ bụ nzukọ maka Cult of the Dead. Omenala ndị a na-agafe ma na-atụgharịkarị n'oge oge esemokwu na isi ike.
Ọ bụ ezie na ndị otu ụka Katọlik nọ n’ọkwá dị elu esorola ma kwuo okwu na Neapolitan Cult of the Dead, òtù nzuzo ahụ enwebeghị usoro iwu, isi, ma ọ bụ ọbụna onye nnọchi anya. Ọ bụ naanị otu ndị nkịtị na-elekarị usoro nhazi nke Chọọchị anya dị ka nke ha, ọ bụ ezie na omume ha metụtara òtù nzuzo ahụ ka na-emegide.
Taa Okpukpe nke Ndị Nwụrụ Anwụ na-arụsi ọrụ ike na karịsịa n'ime Naples, a na-eleda ya ma ọ bụ na-ata ụta banyere ya ndị njem nleta site na ndị obodo nwere echiche ndị Ọtọdọks. Ọ bụ ezie na emechibidoro ọha mmadụ ọtụtụ ebe ebe a na-eli ozu na ebe a na-eli ozu dị iche iche, saịtị ndị dị ka catacombs nke San Gennaro na ụka nke Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco bụzi isi ụlọ ọrụ ọdịbendị nke Council nke Naples na-achịkwa. Ndị ọbịa ga-akwụ ụgwọ ego mbata ma machibidoro ya ịgagharị na-eduzi iji gbochie itinye aka na òtù nzuzo ahụ. Ọ bụ ezie na nke a emeela ka ọ kwụsịchaa votu a na-achọghị na votu ọkpụkpụ na catacombs na hypogea, mmadụ ka nwere ike ịchọta akara ngosi nke òtù nzuzo ahụ n'ụdị votu mbụ, akwụkwọ ozi na kandụl fọdụrụ n'akụkụ saịtị ndị a, ma ọ bụ na Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, na nso grated window na hypogeum n'okporo ámá. [Foto dị n'aka nri].
Isi ihe a na-eme na nzuzo taa bụ ebe a na-eli ozu Fontanelle ebe enweghị ego ntinye na ndị na-eduzi ndị njem abụghị iwu ugbu a. Ndị otu obodo, I Care Fontanelle, nke e hibere n'afọ 1980 ka ọ gbalịa iwepụ ohi na mbugharị ọkpụkpụ, yana iji mee ka ndị mmadụ kwụsị ịwụ ụlọ arụsị ọhụrụ. na ịhapụ ihe ofufe nke nwere ike imebi saịtị ahụ. Kemgbe ọtụtụ afọ, otu ahụ ekwurula okwu banyere nsogbu na-aga n'ihu na tufa ọgba (nke na-adịbeghị anya ọgba-nke mechiri ebe a na-eli ozu ọtụtụ ọnwa na 2011 na mmiri mmiri na-adịgide taa). Mgbe m na-elekọta Fontanelle onye isi ọfụma lebara nsogbu ndị a anya, enweghị ego na-aga n'ihu emeela ka usoro nlebara ọkụ na vidiyo ahụ ghara ịdịzizi mma. Enweghị ihe nchebe ndị a, Cult of the Dead ka na-arụ ọrụ. Ndị òtù ya na-ahapụ chaplet, kaadị ekpere, kandụl, tiketi lọtrị, mkpụrụ ego, na ọbụna ụmụ bebi plastik na ihe oyiyi okpukpe maka okpokoro isi a kapịrị ọnụ; na ụlọ ọhụrụ maka okpokoro isi ka na-egosi site n'oge ruo n'oge.
Foto # 1: A fresco nke mkpụrụ obi na pọgatrị n'ime Catacombe di Dan Gaudioso Naples, Italy. Edere foto ma jiri ikike Elizabeth Harper mee ya.
Foto # 2: Onyinye nke osisi na ndetu na mpụga Chọọchị Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Naples, .tali. Edere foto ma jiri ikike Elizabeth Harper mee ya.
Foto # 3: Adị ụlọ arụsị okporo ụzọ dị iche iche emere mkpụrụ obi na pọgatrị. Naples, .tali. Edere foto ma jiri ikike Elizabeth Harper mee ya.
Foto # 4: A warawara “osisi fig nke pọgatrị” Naples, .tali. Edere foto ma jiri ikike Elizabeth Harper mee ya.
Image # 5: mummy na-amaghị aha ya, aha ya bụ "Deede Vincent" ma ọ bụ "Vincenzo Camuso." A na-ekwu na ọ bụ "mkpụrụ obi nọ na pọgatrị" ma kpọbata ya n'obodo Bonito, Italy. Edere foto ma jiri ikike Elizabeth Harper mee ya.
Foto # 6: Otu n'ime okpokoro isi a ma ama, nke a na-akwadoghị na Fontanelle na-eli ozu, donna Concetta. Naples, .tali. Edere foto ma jiri ikike Elizabeth Harper mee ya.
Foto # 7: Mkpụrụ ego etinyere na okpokoro isi iji malite ịmalite ime, yana tiketi lọtrị. Naples, .tali. Edere foto ma jiri ikike Elizabeth Harper mee ya.
Foto # 8: Ebe nchekwa kaadiboodu dị ala maka okpokoro isi a na-atụ vootu na ebe a na-eli ozu Fontanelle. Naples, .tali. Edere foto ma jiri ikike Elizabeth Harper mee ya.
Foto # 9: Windo ahụ grated dị na hypogeum na Chọọchị Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Naples, .tali. Edere foto ma jiri ikike Elizabeth Harper mee ya.
Foto # 10: Nhọrọ nke ndị na-adịbeghị anya na ntuli aka ndị a hapụrụ n'ọnụ ụzọ Fontanelle na-eli ozu. Naples, .tali. Edere foto ma jiri ikike Elizabeth Harper mee ya.
Ariès, Philippe. 1981. Oge Oge Ọnwụ Anyị: Akụkọ Ochie nke Omume Ebe Ọdịda Anyanwụ n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Deathwa Ruo Otu Puku Afọ gara aga. New York: Knopf.
Carroll, Michael P. 1996. Egwu Ezochiri Egwu: Ebumnuche nke Katọlik Katọlik na Italytali. Baltimore: Mahadum Johns Hopkins University.
Cenzi, Ivan, na Carlo Vannini. 2015. Il Cimitero Delle Fontanelle Di Napoli: De Profundis. Sally McCorry sụgharịrị. Modena: Logos Edizioni.
Ehlert, Rebecca Lisabeth. 2007. “S. Maria Del Pianto: Mfu, Ncheta na Ihe Nketa na Narị Afọ Iri na asaa Naples. ” Akwụkwọ edemede. Mahadum Queen, Kingston, Ontario, Canada. Nweta site na //Users/elizabethharper/Downloads/Ehlert_Rebecca_L_2000710_MA%20(1).pdf.
Goff, Jacques Le. 1984. Ọmụmụ nke Purgatory. Chicago: University nke Chicago Pịa.
Koudounaris, Paul. 2011. EMPIRE OF ọnwụ: Akụkọ ọdịbendị nke Ossuaries na nellọ Charnel. New York: Thames & Hudson.
Leeden, Michael A. 2009. "Ọnwụ na Naples." Ihe Mbụ, Ọgọst. Nweta site na http://www.firstthings.com/article/2009/08/death-in-naples na 26 March 2016.
Maria, Lombardi Satriani Luigi, na Mariano Meligrana. 1982. Il Ponte Di San Giacomo. Milano: Rizzoli.
Stratton, Iheanacho 2010. Ndị Dị Ndụ na Ndị Nwụrụ Anwụ: Netù Neapolitan nke Okpokoro Isi. Chicago: Ebe Center nke Ebe America na Columbia College Chicago.
"Verchọpụta ihe omimi nke Naples." 2001. Obodo Naples, Mee 17. Nke Giuseppe Contino deziri. Obodo Naples. Nweta site na http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/5645 2001 na 26 Mar. 2016.
“M Na-eche-fontanelle.” 2015. M Na-eche Fontanelle. Np, nd Nweta site na http://www.icare-fontanelle.it na 26 March 2016.
"Purgatorio Ad Arco." Nd Purgatorio Ad Arco. Santa Maria Delle Anime Del Purgatorio Ad Arco. Nweta site na http://www.purgatorioadarco.it/ na 26 March 2016.